Leg Pain & toothache
Thursday night, I started having pain in my right leg has heavy pain, pain along the inside of my leg, right side near knee. It hurt and aches. Leg pain can occur when I stand for long periods of time.
Treat my leg pain in the front of my shin ( the front of the leg below the knee ) withaheat pack – the pain. Treating pain with heat pack can be extremely effective and easily affordable.
Treat my toothache, to reduce pain and swelling ofatoothache with an ice pack on the outside of my cheek or jaw, useaface cloth that’s been left in the freezer over the affected area; do not use heat pack – the toothache.
Tennis ball hacks to release leg pain. Placingatennis ball on the ground and gently rolling it under each foot for 1 to5minutes can help loosen up my leg pain. This gentle massage will give my soft feet muscles some relief.
မေလရဲ့ ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်မှာ BLOG အသစ်ဖွင့်ဖြစ်ပါတယ် .... ဟိုး လွန်ခဲ ့သော နှစ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကလိုဘဲ ကိုယ့် စိတ်ထဲရှိတာ ဒီနေရာလေးမှာ ကိုယ် ရေးမယ်။
Welcome May Please Be Good!
ရေလိုအေးပြီး ... ပန်းလို မွှေးပါစေ ...
ဘေးရန်ကင်းရှင်းပါစေ ... အနာရောဂါ ကင်းရှင်းပါစေ ....
သွားလေရာ .. လာလေရာ .. အရပ်ရှစ်မျက်နှာတိုင်းမှာ .. သူတော်ကောင်း၊ သူမြတ်လောင်းများနှင့်သာ တွေ့ကြုံ ဆုံစည်းပါစေ ....
အကျပ်အတည်း၊ အကျဥ်းအကျပ်များနှင့်လည်း ကင်း၀ေးပြီး ကူညီသောသူများနှင့်သာ တွေ့ဆုံပါစေ ....
ကိုယ် နေရာရဖို့ သူများအား ခလုတ်တိုက် ပုတ်ခတ် စော်ကားသောသူများနှင့်လည်း ၀ေးပါစေ
အနှောင့်အယှက် အတိုက်အခိုက်များလည်း ကင်း၀ေးကြပါစေ ...
လူတစ် ယောက်နဲ့ တစ် ယောက် ကံ ခြင်း မတူ၊ ဇာတာ ခြင်း မတူသည့်အတွက် မနာလိုခြင်း၊ ၀န်တိုခြင်း ကင်းတယ်။
ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာခြင်းဟာလည်း သူ့ကံ နှင့် သူ့ဇာတာပါ ..
ပြိုင်ဆိုင် ... အနိုင်ယူလိုစိတ်ကင်းတယ်။
ရေခြား မြေခြား၊ နိုင်ငံခြားမှာ အဆင် ပြေပြေ နေထိုင်နိုင်ခြင်း၊ အဆင်မပြေခြင်းက လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကံဇာတာ မတူပါဘူး။
အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရာ အားလုံး သူ့ ကံဇာတာနှင့် သူ ပါ။
ကိုယ့် ကံဇာတာက ပေးဆပ်ရမယ့် ဇာတာ .... ကိုယ့် စိတ်ဓာတ်က ရယူလိုစိတ် ....
တကယ့် တကယ်တန်း ဘာမှ ရယူ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိခဲ ့ဘဲ ကိုယ်ကသာ ပြန်ပေးဆပ်ရတဲ့ ၀ဋ်ကြွေး ကံဇာတာ ..
အစွန်း နှစ်ဖက်ကြား အချိန်တိုင်း ကိုယ်၊ စိတ် ပင်ပန်းနေရတာမို့ ......
စိတ်ကျေနပ်စွာ၊ စိတ်နှစ် ကိုယ်နှစ်၊ စိတ်ပါ လက်ပါ၊ စေတနာစိတ်ထား ပေးဆပ်ရတဲ့ ကိုယ် ဖြစ်ရလိုပါ၏။